ဗီဒီယို - ဒီဇိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်မှု
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 10, 2010 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2015 Douglas Karr
Jon Arnold သည် Tuitive = Usability ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။ နေ့အလင်းရောင်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များရှိပါသည်။ လျှောက်လွှာသည်အလွန်ခက်ခဲသောပြissuesနာအချို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်မည်သူမျှအမှန်တကယ်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လျှင်စွန့်ခွာမှုသည်မြင့်မားပြီးရောင်းအားမှာလည်းခက်ခဲလိမ့်မည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မန်နေဂျာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများသည်လျှောက်လွှာတစ်ခု၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုကိုမကြာခဏဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်။ အသုံးပြုမှုကိုသော်လည်းအသုံးပြုသူကဆုံးဖြတ်သည်! အသုံး ၀ င်သောကျွမ်းကျင်သူများသည် software နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ် ဗီဒီယို.
Tuitive သည်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် -
အသုံးပြုသူသုတေသန -“ သင်၏အသုံးပြုသူများကိုသိပါ။ သူတို့သည်သင်မဟုတ်ပါ။ ” စိတ်ကူးစိတ်သန်း“ အသုံးပြုသူ” အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမည့်အစားသင်၏သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များ၊ အပြုအမူများနှင့်ပန်းတိုင်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။
အပြန်အလှန်ဒီဇိုင်း - Interaction ဒီဇိုင်းသည်သုံးစွဲသူများ၏ရည်မှန်းချက်ကိုသိရှိပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအသုံးပြုရလွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုသို့ပြန်ဆိုသောနေရာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း - ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနုပညာဖန်တီးမှု၏လှပမှုနှင့်အခြားအချိန်များတွင်ရိုးရှင်းမှု၏အလှအပဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာများကိုထောက်ပံ့သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
web Design - ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူဗဟိုပြုဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အွန်လိုင်းဘရိုရှာတစ်ခုထက်ပိုသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်စမ်းသပ်ခြင်း - ခန့်မှန်းခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးဝင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်မည်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းများသည်ထိရောက်မှုရှိပြီးမည်သည့်ရလဒ်များရရှိရန်ပိုမိုသန့်စင်နိုင်မည်ကိုအတည်ပြုပေးလိမ့်မည်။
Jon Arnold's ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ စိတ်ကူးဘလော့ဂ်.